Industry zemigodi - China Shandong Yulong kwincindi
Mining Industry CMC isetyenziswa njengoko pelletizing Umatshini kunye arhente ngxelo imbi kwishishini lezemigodi. Le pellet ekrwada yenziweyo CMC unokuhle yokusebenza anti-dubulo kunye noxinzelelo oluphezulu yawa amandla ngeengqalutye nobushushu. Ngelo xesha, ukuba unako ukuphucula kwibakala ngeengqalutye. Xa isicelo pellet le, CMC ungenza ngayo sphericity elungileyo, ukumelana nengcinezelo, ukumelana deformation, usasazeko elungileyo, amandla eliphezulu pellet emanzi, lobushushu eliphezulu anti-dubulo, ubuchule ngamandla ukulawula kunye noAsareli ...
CMC sisetyenziswa pelletizing Umatshini kunye xi arhente kwishishini lezemigodi. Le pellet ekrwada yenziweyo CMC unokuhle yokusebenza anti-dubulo kunye noxinzelelo oluphezulu yawa amandla ngeengqalutye nobushushu. Ngelo xesha, ukuba unako ukuphucula kwibakala ngeengqalutye.
Xa isicelo pellet le, CMC ungenza ngayo sphericity elungileyo, ukumelana nengcinezelo, ukumelana deformation, usasazeko elungileyo, amandla eliphezulu pellet emanzi, lobushushu eliphezulu anti-dubulo, ubuchule ngamandla ukulawula ukukhulula amanzi pellet kunye nokusebenza kakuhle metallurgical.
Xa emanzini ayinto, CMC nga kwandisa ngokubalulekileyo wettability of talc granule kunye nokufikelela ayinto ukwahlulwa emanzini esikrwada talc.
CMC sisetyenziswa silicate gangue inhibitors ukuze kuthintelwe abakhokelayo esekungcoleni sobhedu bakhokele. Kwaye ngamanye amaxesha isetyenziswa njenge dispersant of ngebhitumene.
Uhlobo ishishini lemigodi: IP50 and IP100
Previous: Industry samazinyo